LG G2 ကို Android 4.4.4 သို့တစ်ဆင့်ချင်းအဆင့်မြှင့်တင်နည်း Androidsis
LG G2 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ဒီဆောင်းပါးအသစ်မှာမင်းကိုနည်းမှန်လမ်းမှန်သင်ပေးချင်တယ် LG G2 ကို Android 4.4.4 KitKat သို့အဆင့်မြှင့်ပါ နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် Cyanogenmod အားဖြင့်ညစဉ်ညတိုင်း.
ဤဆောင်းပါး၏ထိပ်ရှိဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြင့်ရိုက်ကူးပုံကိုသင်မည်သို့မြင်နိုင်သနည်း LG G2 သည်နောက်ဆုံးပေါ်ညဥ့်နက်သည့် Cyanogenmod နှင့်ထွက်ပေါ်လာသည်FM ရေဒီယိုသို့မဟုတ် Quick Memo လုပ်ဆောင်ချက်ကဲ့သို့ LG ၏ကိုယ်ပိုင် application ကိုလွဲချော်မည်ဖြစ်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Quick Remote သို့မဟုတ် LG ၏ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ဆယ်တင်ခြင်းမှ flashable zips များဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သူ့ဟာသူ
1 ကျွန်ုပ်၏ LG G2 ကို Android 4.4.4 KitKat သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။
3 Rom installation method
ကျွန်ုပ်၏ LG G2 ကို Android 4.4.4 KitKat သို့မည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်နည်း။
LG G2 ကို Android 4.4.4 Kit Kat နှင့် update လုပ်ရန် ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းရှိခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှိရမည် ယခင်က terminal ကိုအမြစ်တွယ် သူနှင့်အတူ ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူ flashed, ဖြစ်နိုင်လျှင် TWRP Recovery ကို.
တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက် Cyanogenmod ကိုလုံခြုံစွာအဆင့်မြှင့်တင်ပါ, အရန်ကူးရန်ရှိသည်, nandroid အရန်သိမ်းခြင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ system တစ်ခုလုံး၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသူ့ဟာသူကနေလုပ်ရှိခြင်းအဖြစ်တစ် ဦး ရှိခြင်း backup EFS ဖိုင်တွဲ လုံခြုံစွာထားရှိမည်။
ဒါတွေအားလုံးအပြင်ထပ်ပြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် USB debugging ကို enable မှ developer ရွေးချယ်စရာနှင့်ဘက်ထရီကို၎င်း၏အများဆုံးအဆင့်အထိအားသွင်းပါစေ။ ဤနေရာတွင်သင့်တွင်ဗွီဒီယိုအပြည့်အစုံရှိနေပြီးမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နှင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုပြသမည့် developer ရွေးချယ်စရာများကိုမြင်နိုင်သည်။
လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေကိုကန့်သတ်ထားတယ် zip format နဲ့နှစ်ခု compressed ဖိုင်တွေ, Rom Nightly သူ့ကိုယ်သူသူနှင့်အတူတ ဦး တည်း သင်ဤ link ကိုအတူတူ download လုပ်နိုင်ပါတယ်သင်ဒီမှာရယူနိုင်သည့်ဇာတိဂူဂယ်လ်အပလီကေးရှင်းများနှင့်အခြား။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ည ၀ င်သော version သည် download စာမျက်နှာ၏ထိပ်ဆုံးတွင်တည်ရှိသည်ကိုသတိရပါ။
ပြီးတာနဲ့ဖိုင်များနှင့် LG G2 ၏အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်သို့ကူးယူခဲ့သည်ကျွန်ုပ်တို့ Recovery mode ကိုပြန်လည်စတင်။ rom installation ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါမည်။
Rom installation method
တခါ recovery mode မှာ reboot လုပ်တယ် အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောလိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပြီးပါကမည်သည့်အရာကိုမဆိုလျစ်လျူရှုခြင်းမပြုဘဲဤအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
ရွေးချယ်မှုမှ သုတ် ငါတို့ရွေး အဆင့်မြင့်သုတ် ငါတို့ရှိသမျှသည်သေတ္တာများ tick sdcard မှလွဲ။။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့် sdcard ကိုရွေးချယ်ပါက Rom နှင့်အသစ်စက်စက် download လုပ်ထားသော Gapps အပါအဝင် terminal ၏ internal memory အားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။
ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာသို့သွားသည် Install ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး လုံးရွေးပြီးသောအခါ Rom ကို ဦး ဆုံးရွေးပါ၊ ထို့နောက်မူရင်းဂူဂဲလ်သို့မဟုတ် Gapps အပလီကေးရှင်းများကိုရွေးချယ်ပါ။ ကျနော်တို့အောက်ကဘားရွှေ့ နှစ် ဦး စလုံးမော်ကွန်းတိုက်၏အသုတ်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်။
အခုသင်လုပ်ရမှာကလုပ်ပါ cache partition ကိုရှင်းလင်းနှင့် dalvik cache ကိုသုတ် ထို့နောက် terminal ကို restart လုပ်ပါ။ LG G4.4.4 model D2 တွင် Android 802 KitKat ကိုနှစ်သက်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G2 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ဝီလျံ Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ပက်ထရစ် Fuentes ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ အလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုလျှင်ငါမှာ CM လများစွာ Ami G2 မော်ဒယ် D805 အတွက် CM ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့အထိဇူလိုင်လ CM11M8 ထွက်ပေါ်လာဖို့စောင့်ဆိုင်းပါ။
Patricio Fuentes အားစာပြန်ပါ
ငါမှန်ကန်သောဖတ်ပြီးသည် FM ရေဒီယိုပျောက်ဆုံးသွားပြီလား။
ကျွန်တော် D806 ပေါ်မှာလုပ်လို့ရလား
Cracy II ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ T ပြသနာမရှိတဲ့ T Mobile D801 ရှိတယ်။ ဒီမွမ်းမံမှုနှင့်အတူဖြေရှင်း?
Cracy II သို့ပြန်သွားပါ
lg g2 d-802 အတွက်ကျွန်ုပ် download လုပ်ရမည့် gapps ၏မည်သည့် link သည်
Brayan Engativa Pardo ဟုသူကပြောသည်
Rom ကတော့ကောင်းပါတယ်၊ တစ်ခုတည်းသောမကောင်းတဲ့အရာကတော့ဘက်ထရီကအရမ်းနည်းတယ်။ d805 ပေါ်မှာ install လုပ်ပါ
Brayan Engativa Pardo အားစာပြန်ပါ
Attilio ကက်စထရို ဟုသူကပြောသည်
G2 အတွက်အကောင်းဆုံး ROM သည် CloudyG3 2.0 ဖြစ်သည်
Atilio Castro အားပြန်ပြောပါ
anibal villamil ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း ... ဒီ ROM ထဲမှာဘာတွေပါဝင်တယ်၊ ငါ့ကိုဘယ်လို install မလဲငါ့ကိုရှင်းပြနိုင်မလား ... lg g2 d805
anibal villamil သို့ပြန်သွားပါ
Google Play စတိုးချိန်ညှိချက်များအားလုံး
Android 5.0 Lollypop အတွက်အမြန်ချိန်ညှိချက်များ၏ဗားရှင်းသစ်၊